Indlu yaseCoos Bay enombono weBay....
(254 okushiwo abanye)
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Mike
Ibekwe endaweni eyodwa ukusuka ku-Hwy 101 endaweni endala, ethule. Indlu inomnyango wangasese kanye negceke.
Izincwadi, imidlalo yebhodi, i-Smart TV, i-Xbox bukhoma nemidlalo, i-Hulu, i-Netflix, i-wifi, isistimu ye-Bluetooth stereo, futhi uxhume noma iyiphi idivayisi. Igumbi lokuhlala elikhulu elinokubukwa kwe-Bay ukuze ujabulele iziqhumane.
Eduze kwedolobha iCoos Bay kanye neMill Casino. Amabhishi amaningi amahle kanye ne-Sand Dunes edumile emhlabeni wonke eqhele ngamamayela ambalwa.
Ngakho-ke khululeka futhi ubukele imikhumbi idlula isuka kule ndlu enhle engu-1bd / 1bth, bay view cottage.
Le ndawo isendaweni emaphakathi enokubukwa kwe-Bay. Igumbi lokuhlala elikhulu eline-wifi, i-Xbox live plus games, i-smart TV, i-Hulu, i-Netflix, i-Bluetooth stereo nayo yonke imidlalo yebhodi edumile. Ikhishi elinosayizi ogcwele onakho konke okudingayo ukuze udle. Igumbi lokulala elinombhede olingana nendlovukazi, i-TV ebonisa i-TV yegumbi lokuhlala (i-HDMI-3), negceke langasese ozozipholela kulo.
4.91(254 okushiwo abanye)
Indlu isendaweni ethule endala. Eduze kweThe Mill Casino kanye nedolobha laseCoos Bay. Ungabuka iziqhumane usendlini noma wehlele ebhodini ukuze ujabulele umbukiso. Impela amabhishi, igalofu, kanye neDunes kuhamba phambili emhlabeni. Jabulela ugu lwase-Oregon kule ndlu ebanzi engu-1bd/1bth.
Sawubona, igama lami nginguMike futhi ngiyisivakashi sakho. Ukusebenzisana kwami nawe kuncane. Uzothola umbhalo ngosuku lokufika kwakho onekhodi ebhokisini lokukhiya elingukhiye. Sicela ukhululeke ukuxhumana nami uma udinga noma yini ngesikhathi sokuhlala kwakho. Okufana namathawula, izinto zokugeza, nokulungisa. Ayikho indawo yokupaka ku-driveway yamayunithi aphansi. Abaqashi bahle kakhulu futhi bayaqonda kodwa badinga ukuphuma ngawo wonke amahora osuku ukuze baye emsebenzini. Uma kungenjalo ujabulele ukuhlala kwakho.
Sawubona, igama lami nginguMike futhi ngiyisivakashi sakho. Ukusebenzisana kwami nawe kuncane. Uzothola umbhalo ngosuku lokufika kwakho onekhodi ebhokisini lokukhiya elingukhiye. S…